Izizathu Ezi-5 Isivakashi Esifikile Ekhasini Lakho | Martech Zone
Izinkampani eziningi kakhulu zakha iwebhusayithi, iphrofayili yomphakathi, noma ikhasi lokufika ngaphandle kokuqonda inhloso yesivakashi. Abaphathi bemikhiqizo bacindezela umnyango wezokumaketha ukuthi ubhale uhlu lwazo. Abaholi bacindezela umnyango wezokukhangisa ukuthi ushicilele ukutholwa kwakamuva. Amathimba okuthengisa acindezela umnyango wezokumaketha ukuthi ukhuthaze ukunikezwa bese uhamba phambili.
Lokho konke kuyizisusa zangaphakathi njengoba ubheka ukuklama iwebhusayithi noma ikhasi lokufika. Lapho sakha futhi sakha ubukhona bewebhu benkampani, i-pushback esithola ngokushesha iyafana… konke lokho ilahlekile. Kwesinye isikhathi kuba yifayela le- isici sewebhu lokho akukho, kepha isikhathi esiningi iqiniso elifihlekile ngenkampani.
Ngisebenza ekuqeqesheni izinkampani ezinkampanini ezinkulu zomphakathi ezinamakhulu ezinkampanini futhi ngacelwa ukuba ngenze isethulo ngezici zekhasi lewebhu noma ikhasi lokufika. Iqiniso liyatshelwa, wonke amakhasi ewebhusayithi yakho ayikhasi lokufika. Isivakashi ngasinye sikhona ngenhloso ethile. Into ebaluleke kakhulu ekhasini lewebhu ukuqinisekisa ukuthi unikeza indlela yalesi sivakashi!
Lapho sakha amasayithi, amaphrofayli, namakhasi okufika ezinkampanini, umthetho owodwa engihlala ngibakhumbuza wona yilokhu ::
Asiklanyelanga futhi sakhe iwebhusayithi yakho yenkampani yakho, sayiklama futhi sayakhela izivakashi zakho.
Iyini Inhloso Yesivakashi Sakho?
Kunezizathu eziyisisekelo ezi-5 zokuthi isivakashi ngasinye sifike kusayithi lakho, iphrofayili yezokuxhumana, noma ikhasi lokufika. Yilokho nje… 5 nje:
Ucwaningo - iningi labantu abafika ekhasini lewebhu benza ucwaningo. Kungenzeka ukuthi bacwaninga inkinga embonini yabo noma ekhaya labo. Kungenzeka ukuthi bacwaninga inkinga ngomkhiqizo noma ngensizakalo yakho. Kungenzeka ukuthi bacwaninga imininingwane yamanani entengo. Kungenzeka ukuthi bavele bazifundise njengengxenye yomsebenzi wabo. Kunoma ikuphi, inkinga ukuthi unikeza izimpendulo abazifunayo noma cha. Njengoba uMarcus Sheridan ephendula encwadini yakhe, Bayabuza, Uyaphendula!
Ukuqhathanisa - Kanye nocwaningo, isivakashi sakho kungenzeka siqhathanisa umkhiqizo wakho, insizakalo yakho, noma inkampani yakho nomunye. Kungenzeka ukuthi baqhathanisa izinzuzo, izici, amanani entengo, ithimba, indawo (iz), njll. Izinkampani eziningi zenza umsebenzi ovelele wokushicilela amakhasi wangempela wokuqhathanisa wabancintisana nabo (ngaphandle kokuthatha ama-jabs) ukuze bazihlukanise. Uma isivakashi besenza ukuqhathanisa kwakho nabantu esincintisana nabo, ingabe ukwenza lokho kube lula ukuthi bakwenze?
Ukuqinisekiswa - Mhlawumbe isivakashi besingaphansi kwezinyathelo zokugcina ohambweni lwabo lwamakhasimende kepha bebenezinkinga ezimbalwa ezikhathazayo ngawe noma ngenkampani yakho. Mhlawumbe bakhathazekile ngezikhathi zokuqalisa, noma ukwesekwa kwamakhasimende, noma ukwaneliseka kwamakhasimende. Uma isivakashi sihlala ekhasini lakho, ngabe unikeza noma yikuphi ukuqinisekiswa? Izinkomba zeTrust ziyinto ebucayi - kufaka phakathi izilinganiso, izibuyekezo, ubufakazi bamakhasimende, izitifiketi, imiklomelo, njll.
Connection - Lokhu kungaba ngesinye sezici ezikhungathekisa kakhulu kumawebhusayithi ezinkampani ezinkulu kakhulu. Mhlawumbe bangumhlinzeki wesoftware… futhi ayikho inkinobho yokungena ngemvume. Noma ungumuntu ofuna ukuthola umsebenzi - kepha alikho ikhasi lomsebenzi. Noma bayinkampani enkulu nomzamo wokwenza ngcono umzila wangaphakathi nokusebenza kahle, bayakugwema ukubeka izinombolo zefoni. Noma okubi kakhulu, banayo futhi bakucindezela kusiqondisi sefoni. Noma ifomu lewebhu olithumelayo alikuniki umongo empendulweni noma ukuthi ungaluthola kanjani usizo oludingayo. Yilapho izingxoxo zezingxoxo zenza amagxathu amakhulu. Ithemba lakho noma ikhasimende lifuna ukuxhumana nawe… ulwenza lukhuni kangakanani kubo?
Ukuguqulwa - Kanye nokuxhumeka, ingabe ukwenza kube lula kumuntu ofisa ukuthenga ukuze akwenze lokho? Kuyangimangaza inani lamasayithi noma amakhasi okufika angithengisile… bese engeke angithengisele. Ngikulungele - ikhadi lesikweletu esandleni - bese bangiphonsa kumjikelezo omubi wokuthengisa lapho ngiphoqeleka ukukhuluma nommeleli, ukuhlela idemo, noma ukuthatha esinye isinyathelo. Uma othile efuna ukuthenga umkhiqizo noma insiza yakho lapho besendaweni yakho, akunjalo?
Ngakho-ke… njengoba usebenza ukuklama iwebhusayithi, iphrofayili yomphakathi, noma ikhasi lokufika - cabanga ngenhloso yesivakashi, lapho befika khona, ukuthi iyiphi idivayisi abafika kuyo nokuthi ungayondla kanjani leyo nhloso. Ngikholwa ukuthi wonke amakhasi adinga ukwakhiwa ngalezi zizathu ezi-5 ukuthi izivakashi zifika lapho. Ingabe amakhasi akho anawo?
Tags: ukuklanywa kwekhasi lokwakhaabantuvakashela izizathuisimilo sezivakashiinhloso yezivakashiInhloso yewebhusayithi